Spotlight on SKA's work in the Somali Aviation and Maritime sectors - Video - SkyscraperCity
Spotlight on SKA's work in the Somali Aviation and Maritime sectors - Video
Somali part starts at 07:30
Nin Ajnabi ah oo ahaa xisaabiyaha Shirkada SKA ee gacanta ku heysa Maamulka Garoonka Diyaaradaha ayaa maanta la dhuuntay lacago uu in muddo ah u hayay shirkada, isagoo ninkan diyaarad ka raacay Garoonka.
Ninkan oo lagu magacaabo Magdi ayaa dhalashadiisa lagu sheegay dalka Masar, isagoo ahaa Xisaabiyaha Shirkada SKA.
Ilo ku dhow dhow Garoonka Diyaaradaha ayaa u sheegay Jowhar.com in ninkan uu hayay lacagaha Shirkada SKA ka qaado diyaaradaha soo caga dhigta, iyadoo aan si dhab ah loo ogeyn cadadka lacagta.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan lacagaha uu hayay ay ku dhow dahay Malaayiin Doolar Shirkada ugu uruurtay garoonka intii ay waday howsha maamulida Garoonka, inkastoo aan la xaqiijin karin.
Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho Cali Maxamed Ibraahim ayaa sheegay inuu maqlay warka sheegaya inuu lacago la baxsaday nin ajnabi ahaa oo u shaqeynayay SKA, inkastoo uusan faah faahin kale sii heyn.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ninkan Ajnabiga lagu qabtay garoonka diyaaradaha Magaalada Nairobi, halkaasoo uu ka degay, waxaana la sheegayaa in markii ay ka war heleen Saraakiisha SKA ay la hadleen Waaxda Socdaalka dalka Kenya, si ay u qabtaan ninkaas.
Arrintan ayaan la ogeyn saameynta ay ku yeelan karo howlaha Shirkada SKA ay ka wado garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana Shirkada mudadii ay ka howl galeysay garoonka ay ku soo kordhisay adeegyo kala duwan iyo horumar ay ku sameysay marinadii ay ku degi laheyd Diyaarada.